Mkpa mmanu mmanu na-eme ka mmanu di nkpa kwesiri ekwesi maka | Ọkọwa Okwu Ahụike
Mmanụ ndị dị mkpa enwetawo ewu ewu n'ihi uru dị na ha. Onye ọ bụla nwere ike iji mmanụ dị mkpa dị ka mkpa ha si dị. E nwere mmanu di iche iche di nkpa.
Ndị dị iche iche na-eji mmanụ dị mkpa dị iche iche eme ihe maka mkpa ha. Ihu anụ ahụ na-adị iche n’otu onye n’otu n’otu, i kwesiri ịma nke ọma na mmanụ dị mkpa nwere ike imerụ ahụ gị ma ọ bụrụ na akpịrị anụ gị ahụ. Ma, ọ dịghị mkpa ịtụ egwu.
Nwere ike iji dilution mmanụ dị mkpa iji gbaze ịta mmanụ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere anụ ahụ dị nro.
A na - eme mmanụ dị mkpa site na ihe niile sitere n'okike nke mere na ọ dịghị enwekarị nsonaazụ ọ gwụla (ọ gwụla ma ị jirila otu ihe na - adịghị gị mma).
Mkpa mmanụ dị mfe iji ma nwee ọtụtụ uru ahụike dị na ha. A na-ejikarị ha maka inhalation dị mfe, inhalation uzuoku nke nwere ike inyere aka na oyi na nje / flu, ịhịa aka n'ahụ na-enyere aka n'ịgbanye anụ ahụ, ime ụlọ ọkụ, ịsa ahụ na ọtụtụ ojiji ndị ọzọ.
Ọ bụ eziokwu na mmanụ dị ezigbo mkpa bụ mmanụ na-agbanwe agbanwe ma nwee ike ịbanye na akpụkpọ ahụ ngwa ngwa. Iji mmanụ dị mkpa nwere ike ibute mgbakasị ahụ ma ọ bụ nwee uche ma ọ bụrụ na ejighị mmanụ ụgbọelu gbanye nke ọma ma ọ bụ jiri ya n'ọtụtụ nnukwu. Childrenm Childrenntak andr and na nd elderly okenye nwere ike more na -emekwu nk sometimes ma ana-ah sometimesu ha mgbe ụfọdụ oil n sensitive d sensitive mmanu d essential mkpa.
Mgwacha mmanụ dị mkpa na-eme dị ka usoro iji belata ike nke mmanụ dị mkpa.
Ndị mmadụ nwegasịrị ike ịmata ihe na mmanụ dịkarịsịrị nro nwere ike ịhọrọ iji mmanụ ụgbọelu na-egbochi mmanụ ịgba mmanụ dị mkpa. Mgbe obula i jiri mmanu di nkpa na nke mbu gbalie ike inyocha onwe gi banyere uche site na itinye mmanu ndi di nkpa n’ime mmanu mmanu obula n’iru ihe ndi ozo.
Mmetụta anụ ahụ, ụdị mmanụ dị mkpa eji na ogo nsonaazụ ịchọrọ na-ekpebi ịdị mkpa mmanụ dị mkpa. Gbalịsie ike jiri nlezianya na nlezianya mee ihe mgbe ị na-eji mmanụ dị mkpa ma dozie ma ọnụego mmanụ ejiri yana ọnụego dilution dabere na nzaghachi anụ ahụ ga-enyere gị aka iji uru kachasị mkpa nke mmanụ dị mkpa.
Iji mmanu mmanu di nkpa emetutaghi uru mmanu di nkpa n ’uzo obula. Ọ bụ naanị otu ka esi eme mmanụ dị mkpa maka mmadụ niile, ọbụlagodi maka ndị nwere anụ ahụ anụ ahụ. A na-atụ aro ka ịzụta mmanụ dị mkpa site na isi ntụkwasị obi, nke na-arụ naanị mmanụ dị mkpa.
Nke a ga - ahụ na ị ga - enweta uru mmanụ dị mma kachasị mma n'ụzọ kachasị mma.
Osisi mmanu mmanu mmanu mmanu: 7 ihe di iche iche I ghaghi ima